Ksnip: Yemahara, muchinjika-chikuva Qt-based app ye screenshots | Kubva kuLinux
Ksnip: Yemahara uye yekuyambuka-chikuva Qt-based app ye screenshots
Linux Tumira Kuisa | 09/06/2021 06:00 | Applications, Dzidziso / Mabhuku / Matipi
Nhasi tichataura nezvekushandisa kwazvino uye kunobatsira kunodaidzwa "Ksnip". Ndeipi imwe yemapurogiramu mazhinji, ane chinangwa chiri tora muchero kubva kwedu Desksndiko kuti, izvo zvinoonekwa zviri kumhanya mukati mekombuta yedu.
Asi, "Ksnip" Kunze kwekuve yemahara, yemazuva ano uye yakawanda, inobvumirawo gadzirisa uye mugovane iwo masikirini akagadzirwa uye akapepetwa.
ShareX: Vhura Sosi App ye Screenshot muWindows
Kunyangwe, pachezvangu mumunda we screen vanobvuta, Ini ndinowanzo shandisa yangu yemuno application Desktop Nharaunda (XFCE uye Plasma), dzimwe nguva ndinofarira kushandisa uye kukurudzira Shutter.
Zvisinei, kune zvakawanda akafanana kana mamwe maapplication zvakanaka kwazvo zvese GNU / LinuxKana Windows o MacOS. Naizvozvo, pazasi isu tichasiya kune avo vanofarira chidzidzo ichi, zvinongedzo zvine chekuita nezvakanyorwa zvemberi pane zvakafanana zvinoshandiswa
"ShareX, mukuwedzera pakuva yemahara uye yakavhurika application, inokwanisa kutora kana kurekodha chero nzvimbo yekombuta, inogona kugovana mifananidzo yakatorwa, kurodha mifananidzo, zvinyorwa kana mamwe marudzi emafaira kune akawanda anogadziriswa uye anokodzera nzvimbo dzinoenderana. Zvikonzero zvinoita kuti ive yakanakisa screen capturer, faira yekugovana mashandiro uye chinobatsira chekugadzira chishandiso." ShareX: Vhura Sosi App ye Screenshot muWindows
Flameshot: Inesimba skrini yekubvuta yeLinux
Shutter: Yakanaka kwazvo skrini yekutora chishandiso.
-Shots: Chishandiso chinonakidza kutora chinovhara
1 Ksnip: Screenshot uye Annotation Chishandiso
1.1 Chii chinonzi Ksnip?
1.3 Dhawunirodha, kumisikidza, shandisa uye screenshots
Ksnip: Screenshot uye Annotation Chishandiso
Chii chinonzi Ksnip?
Zvinoenderana neyako yepamutemo webhusaiti paGitHub, "Ksnip" es:
"Muchinjikwa-chikuva skrini uye chishandiso chishandiso. Zvakare, yakavakirwa paQt uye inopa akawanda annotation maficha eako ma skrini."
"Ksnip" parizvino achienda kwake 1.9.0 version, anova mazuva mashoma aburitswa. Naizvozvo, parizvino ine, pakati pevamwe vazhinji, hunhu hunotevera uye nhau:
Multiplatform rutsigiro: YeLinux (X11, Plasma Wayland, GNOME Wayland, uye xdg-desktop-portal Wayland), Windows, uye macOS.
Capture: Inobata yetsika rectangular nzvimbo iyo inogona kudhonzwa neye mbeva chikomba, cheiyo skrini / yekutarisa iko iko mbeva yegunduru parizvino, yeiyo yose skrini, kusanganisira ese mascreen / monitors, ewindo rewindo iro parizvino rinotarisa, hwindo rehwindo pasi peye mbeva mbeva, pakati pemamwe maitiro kana maitiro.
mugove: Fambisa screenshots yakananga kuimgur.com mumushandisi kana isingazivikanwe modhi. Uye nyangwe kuzviisa kuburikidza netsika-mushandisi-yakatsanangurwa zvinyorwa.
Hora: Inoita kuti zvive nyore kududzira (edit) screenshots nepeni, mucherechedzo, rectangle, ellipse, zvinyorwa, uye mimwe mhedzisiro. Uye zvakare, kubvumidza kushandiswa kwako pachako kana kunamirwa zvitambi, shandisa obfuscation mhedzisiro kumatunhu emufananidzo ne blur uye pixelation, uye wedzera mhedzisiro kumufananidzo (mumvuri, grayscale, shandura ruvara kana muganho).
Dhawunirodha, kumisikidza, shandisa uye screenshots
Nekushandisa kwayo, inogona kuiswa zvakananga mune zvese zvese GNU / Linux Distros, via Pasuru maneja native, graphical, kana koni. Asi, kushandisa yako yazvino vhezheni iwe unogona download uye dzishandise iyo inodikanwa kana yakakodzera faira inoitwa, kubva pane inotevera link uye kuteedzera yakadzama mirayiridzo yeichi chimwe link. Kuti ishandiswe, inofanira kungoitwa kuburikidza neApplication Menyu.
Kuti uwane rumwe ruzivo nezve chishandiso, zvakasiyana installers uye shanduro, uye mafomu ekumisikidza, unogona kushanyira zvinotevera zvinongedzo pa "Ksnip" uye:
Tinovimba izvi "inobatsira shoma posvo" nezve yemahara, yemahara uye yekuyambuka-chikuva application inonzi «Ksnip», ayo akajairika maitiro uye nhau dzayo nyowani vhezheni «1.9.0» ichangoburwa; ndeyekufarira kukuru uye kushandiswa, kweiyo yese «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» uye yemupiro mukuru mukupararira kweinoshamisa, hombe uye kukura ecosystem yezvishandiso zve «GNU/Linux».
Parizvino, kana iwe waifarira izvi publicación, Usamire igovera nevamwe. teregiramu, Chiratidzo, Mastodon kana imwe ye Fediverse, ndoda.
Uye yeuka kushanyira peji redu repamba pa «KubvaLinux» kuti uongorore dzimwe nhau, pamwe nekujoinha chiteshi chedu chepamutemo che Teregiramu kubva kuDesdeLinux. Nepo, kuti uwane rumwe ruzivo, iwe unogona kushanyira chero Raibhurari yepaindaneti Chemhondoro OpenLibra y JedIT, kuwana uye kuverenga mabhuku edhijitari (maPDF) panhau iyi kana mamwe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Applications » Ksnip: Yemahara uye yekuyambuka-chikuva Qt-based app ye screenshots
GRUB 2.06 yakatoburitswa uye inosanganisira rutsigiro rweLUKS2, SBAT uye nezvimwe.
Bitcoin inogona kuve yepamutemo nyoro muEl Salvador